Cabdikariin Xuseen Guuleed oo noqday Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug – Radio Muqdisho
Cabdikariin Xuseen Guuleed oo noqday Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug
Tartanka Madaxtinimo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ku guuleystay oo noqday Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, kadib markii u helay codad dhan 49 cod.
Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay in Mudane Cabdiriin Xuseen Guueled uu helay codad dhan 49
Axmed Macalin Fiqi 40 cod
Cabdikariin Xuseen Guuleed 49 cod
Xilka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa ku guuleystay Cabdikariin Xuseen Guuleed, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha baarlamaanka ee dowlad Goboleedka Galmudug mudane Cali Gacal Casir, iyadoo ay musharaxiintii kale ee la tartamaysay mudane Cabdikariin ugu hambalyeeyeen guusha uu gaaray.
Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa horey u soo noqday Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka ee Xukuumadda Soomaaliya.
Musharaxiinta oo ka hadlay goobta markii ay soo gabo gabowday ku dhawaaqista najiitada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta Madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug, iyagoo ku baaqay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo midnimada bulshada ku nool Gobollada Mudug iyo Galgaduud..
Sidoo kale musharaxiinta ayaa waxa ay soo jeediyeen in wada hadal lala galo Ahlusunna Waljamaaca, si looga qeyb geliyo hanaanka doorashada ee Madaxtinimada dowlad goboleedka Galmudug.
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Galmudug Mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa loo dhaariyay xilka Madaxtinimada ee Galmudug.
Tirinta codadka oo bilaabatay
Baarlamaanka oo loo qeybiyay taariikh nololeedka xubnaha guddiyada madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha